Mareykanka oo xaqiijiyay in weerar dhinaca cirka ah uu ka fuliyay Gobolka Shabellaha Hoose – STAR FM SOMALIA
Mareykanka oo xaqiijiyay in weerar dhinaca cirka ah uu ka fuliyay Gobolka Shabellaha Hoose
Wasaaradda Difaaca Mareykanka (Pentagon), ayaa waxay sheegtay hawlgal qorsheysan oo si wada jir ah, ay habeenkii Khamiista u fuliyeen Ciidamada Mareykanka iyo Somaliya in lagu qaaday xubno ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Difaaca Mareykanka oo lagu magacaabo Peter Cook, ayaa waxaa uu xaqiijiyay in weerarkan uu ka dhacay Deegaanka Toora Toorow Ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Afhayeenka, ayaa wuxuu sheegay weerarkaasi in lala bartilmaameydsaday xubno uu ka mid yahay Xasan Cali Dhoore, laakiin aanu xilligan xaqiijin karin dhimashadiisa, isla-markaana ay wadaan baaritaano ay ku qiimeynayaan.
Abaan Duulaha Ciidanka Xoogga Dalka, General Cali Baashi Maxamed Xaaji Cumar, ayaa sheegay weerarkaasi in lagu dilay Madaxii Amniyaadka Ururka Al Shabaab, Xasan Cali Dhoore iyo xubno kale.
Mar uu ka hadlaayay Peter Cook ujeedada loo beegsaday Sarkaalkan, ayuu sheegay inuu si toos ah ugu lug lahaa weerarkii abaabulnaa ee 25-kii bishii December ee sanadkii 2014-ka lagu qaaday Xerada Ciidamada Amisom, ay ku lee-yihiin Garoonka Aadan Cadde (Xalane), oo ay ku dhinteen askar ka tirsan Amisom iyo muwaadin Mareykan ah.
Sidoo kale wuxuu sheegay inuu Dhoore ka dambeeyay weerarkii 27-kii March ee sanadkii 2015-ka lagu qaaday Hotelka Maka Al Mukarama oo ku yaala Magaalada Muqdisho, laguna dilay muwaadin Mareykanka u dhashay.
Peter Cook, ayaa qoraal ku sheegay in Dhoore uu xilligan qorsheynaayay weerar ka dhan ah muwaadiniinta Mareykanka, ee ku sugan Magaalada Muqdisho.
Weerarkan wuxuu noqonayaa noociisii labaad oo muddo bil gudaheed ah, ay Ciidamada Somaliya iyo Mareykanka kaga fuliyaan Koonfurta Somaliya. Kan kii ka horeeyay waxaa lala beegsaday xero ay ku tababartan dagaal-yahanada Shabaabka, oo ku taala Gobolka Hiiraan.